Delta Air Lines manafatra fiaramanidina Airbus A30 fanampiny 321
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Delta Air Lines manafatra fiaramanidina Airbus A30 fanampiny 321
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao • teknolojia • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Delta Air Lines avy any Atlanta dia nametraka baiko fanampiny ho an'ny fiaramanidina A30ceo miisa 321 mahery. Ity baiko ity dia manaraka ny baiko Delta telo teo aloha ho an'ny kinova ankehitriny Engine Option an'ny mpikambana Airbus A320 Family lehibe indrindra. Ny fiaramanidina dia nanatitra ny A321 voalohany tamin'ny volana martsa tamin'ny taon-dasa. Ny Delta izao dia nanafatra 112 A321 total, izay nateraky ny motera CFM56 avy amin'ny CFM International.
"Ny fampiononan'ny A321, ny fahombiazany ary ny toekareny dia nahatonga azy io ho fiaramanidina tena mahasarika ho an'ny Delta ao amin'ny tamba-jotra eto an-toerana," hoy i Gil West, filoha lefitra mpanatanteraka an'ny Delta sy ny tompon'andraikitra voalohany. "Manome lanja ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny Airbus izahay ary manantena ny handray fiaramanidina A321 vaovao ho tombontsoan'ny mpanjifanay, ny mpiasa ary ny tompon-trano."
"Ny valin'ny fahatokisan'ny Delta ny A321ceo - izay mitondra ny zotram-pitaterana an'habakabaka izao mihoatra ny 100 ny karazana milamina - dia mampiseho ny antso nataon'ny mpandeha, ny mpandraharaha ary ny mpampiasa vola an'io fiaramanidina io," hoy i John Leahy, Chief Operating Officer - Mpanjifa ho an'ny Airbus Commercial Aircraft . “Ny A320 Family dia tena manolotra fampiononana, toekarena ary fahatokisana tsy manam-paharoa ho an'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka toa ny Delta izay mijery ny zavatra tadiavin'ny mpanjifany.”
Ny A321 an'ny Delta rehetra dia hanasongadinana Sharklets mamonjy solika - fitaovana mavesatra fonosana wingtip mitambatra maivana izay manolotra tahiry hatramin'ny 4 isan-jato. Ity tombotsoan'ny tontolo iainana ity dia manome safidy ho an'ny orinasam-pitondrana hanitatra ny halavany hatramin'ny 100 kilaometatra an-dranomasina / 185 kilometatra na hampitombo ny fahafahan'ny karama amin'ny 1000 pounds / 450 kilao.
Maro amin'ireo A321 an'ny Delta no entina avy amin'ny Airbus US Manufacturing Facility in Mobile, Alabama. Nahazo ny A321 voalohany namboarin'i Etazonia tamin'ny taona lasa ny kaompaniam-pitaterana. Amin'ny faran'ny 2017, ny trano Airbus any Mobile dia antenaina hamokatra fiaramanidina efatra isam-bolana, ny ankamaroan'ny mpanjifa US Airbus.
Tamin'ny faran'ny volana aprily dia nanidina fiaramanidina fiaramanidina Airbus 187 i Delta, nahitana mpikambana ao amin'ny fianakaviana A145 320 ary widebodies 42 A330.